Nepali: The Maze Of Existence | ILLUMINATI AVENUE
Nepali: The Maze Of Existence
Nepali: The Maze Of Existence Mar 22, 2020 19:55:35 GMT
Post by tonyt1031 on Mar 22, 2020 19:55:35 GMT
अस्तित्व को भूलभुलैया
जीवन एक नक्शा हो जुन तपाईंको निर्णयहरू द्वारा आकर्षित गरिएको छ। प्रत्येक दिन, अस्तित्वको भूलभुलैया तपाईंलाई सयौं मार्गको साथ प्रस्तुत गर्दछ र तपाईंले आफ्नो छनौटहरूको माध्यमबाट एक दिशा चयन गर्नुपर्दछ। तपाईं आफ्नो समय कसरी खर्च गर्नुहुन्छ? तपाईं कहाँ जानुहुन्छ? तिमी कोसँग कुरा गर्ने छौ? तपाईं के भन्नुहुन्छ? प्रत्येक निर्णयले यसको आफ्नै प्रश्नहरूको सेटको साथ भिन्न सडकमा जान्छ।
सरल छनौटहरूको बिच चिन्न सक्ने तपाईंको क्षमताको अर्थ धन वा गरिबी, बिरामी वा स्वास्थ्य, द्वन्द्व वा शान्तिको जीवन बिचको भिन्नता हुन सक्छ। एउटा सानो निर्णय जुन तपाईं आज गर्नुहुन्छ उत्प्रेरक हुन सक्छ जसले तपाईंलाई तपाईंको लक्ष्यहरूको लागि सडकमा पठाउँदछ - यद्यपि तपाईंलाई यो थाहा छैन कि यो विकल्प कत्तिको महत्त्वपूर्ण छ तपाईंले अन्तसम्म पुग्न र पछाडि हेरेसम्म।
जीवनको नक्शा पछाडि पछाडि पछाडि जान सक्दछ, अन्त्यबाट सुरुमा पथ देखाउदै।
जब जीवनको महत्त्वपूर्ण छनौटहरू गर्ने क्रममा, एक व्यक्तिको कार्यहरू उनीहरूको निर्णयमा निर्भर हुन्छन्: आन्तरिक कम्पास जुन उनीहरूको ज्ञान, बुद्धिमता, र अनुभवले गठन गर्दछ। न्याय एक मांसपेशी जस्तो काम गर्दछ कि अनन्त जिज्ञासा र यो ब्रह्माण्डको सबैभन्दा गहिरा रहस्यहरू बुझ्ने इच्छाको साथ व्यायाम गर्नुपर्दछ।
धेरैले इनाम प्राप्त गर्न तयार हुनु अघि उनीहरू खोज्छन्। एक जूवा खेलाडीले अचानक भाग्य प्राप्त गर्न सक्दछ तर सबै गुमाउँछन् किनभने उसलाई यो बचत गर्ने ज्ञान छैन। एक कलाकार एक रात एक सुपरस्टार बन्न सक्दछ तर आफैलाई घोटालामा फस्न सक्छ किनभने उनले अनुभव प्राप्त गर्न समय निकालेन जबकि उनी अझै अज्ञात थिइन्। एक राष्ट्रपतिले उच्च शक्ति प्राप्त गर्न सक्छ तर पिरामिडको शीर्ष एक्लो ठाउँ छ कि यदि उसले ईमानदार सल्लाहकारहरू छनौट गर्न अभाव छ भने। यदि तपाईं महानता खोज्नुहुन्छ भने, यो तपाईंको लागि कत्तिको योग्य हो भनेर मात्र सोच्नुको सट्टा यसको लागि तयारी गर्न तपाईंको समय खर्च गर्नु राम्रो होइन र? यदि तपाईं आफ्नो जीवन थोरै संग व्यवस्थापन गर्न सिक्न सक्नुहुन्न भने, तपाईं कसरी यति धेरै यो प्रबन्ध गर्न अपेक्षा गर्न सक्नुहुन्छ? तपाईको लक्ष्यको खोजीमा हरेक जाग्ने घण्टा र प्रत्येक मिनेटको ज्ञानको खोजीमा खर्च गर्नुहोस् जुन तपाईं अन्तमा पुग्नुहुँदा तपाईंलाई चाहिने आवश्यक हुन्छ। महानताको कुनै गन्तव्य छैन। यस सडक को लागी बुझ्न को लागी यात्रा गर्नु पर्छ। जीवनको व्यस्ततामा, सिकेको पाठहरू बिर्सन र आफ्नो लक्ष्यहरूको दृष्टि हराउन सजीलो हुन्छ। इल्युमिनती परम्परामा, हाम्रा सदस्यहरूले हाम्रा प्रतीकहरूको सन्देशहरूमा निरन्तर मार्गदर्शन पाउँछन्। धेरै जसले हाम्रो सिद्धान्तहरू अनुसरण गरेर सफलता प्राप्त गरे स्वेच्छाले हाम्रो प्रतीकात्मक कलाकृति, वास्तुकला र डिजाइनमा समावेश गर्दछन्। हाम्रो सन्देशहरू समाजमा बिखेरेर, सदस्यहरूले उनीहरूको जीवनको उद्देश्य कहिले भुल्दैन, र हराएको पनि सत्यमा पुग्न सक्छ। पिरामिड, नेत्र, प्रकाश, र अनन्त सर्कल जसले इल्युमिनतीको चिन्ह बनाउँछ, अवधारणाहरूको अनुस्मारकको रूपमा काम गर्दछ जुन मानवलाई सहस्राब्दीका लागि निर्देशित गर्दछ। अनन्त ओथमा हस्ताक्षर गरेर, हाम्रा सदस्यहरूले शक्ति पत्ता लगाउँदछन् जुन उनीहरूको आफ्नै रिजोलुसन भित्र लुक्छ - र हाम्रा हस्ताक्षरहरू यसको वाचाको बखत राखेर, हामी आफू र मानवताबीच स्थिर, शारीरिक सम्बन्ध बनाउँछौं।
कुनै रीतिथितिको शक्ति यसको आन्दोलनहरूमा फेला पर्दैन बरु दिमागको स्थितिमा जुन यसको सहभागीहरूले परिणाम दिन्छन्। महत्वपूर्ण निर्णयहरूको सामना गर्नुपर्दा, हाम्रा सदस्यहरूले महानता प्राप्त गर्न उनीहरूले चाल्नु पर्ने कदमहरू फेला पार्न ज्ञान र बुद्धिको बारेमा हामीले परम्परा मार्फत आह्वान गर्दछन्।
तपाईं जहाँ भए पनि आफ्नो यात्रामा - र अँध्यारो सडक लाग्न सक्छ - थाहा छ कि तपाईंले जीवन भर भण्डारण गर्नुभएको ज्ञान अगाडिको मार्गको लागि तपाईंको लालटार हुनेछ।
सुरक्षित मार्गहरू छनौट गर्न पाइलटहरू तिनीहरूका उपकरणहरूको शुद्धतामा भर पर्छन्। मानिसहरु आफ्नो जीवन को लागी पथ छनौट गर्न न्याय को सही मा निर्भर गर्दछ। ज्ञान, बुद्धिमत्ता र अनुभवको खोजी गर्नुहोस् तपाईको दिमागको उपकरणलाई तिखार्न ताकि तपाईको लक्षाहरूको लागि बाटोले तपाईलाई तपाईको गन्तव्यका लागि तयार पार्छ। ज्ञानमा लगानी गर्नु जीवनका जुवाहरू मध्ये सुरक्षित हुन्छ। ▲
Author: The Illuminati
Title: The Maze Of Existence